Izizathu ezili-9 zokuba amadoda angabahoyi abasetyhini - Ubudlelwane Ingcebiso
Izizathu ezili-9 zokuba amadoda angabahoyi abasetyhini
Amadoda ngamanye amaxesha afumana igama elibi kwihlabathi lokuthandana ngenxa yokubeka umva kakhulu malunga nobudlelwane kunye neemvakalelo. Olu hlobo lwesimo lunokwenza kubonakale ngathi umntu akahoyi intombazana nokuba akakho. Ngelixa ukuthintela imiyalezo yomfazi kunye nokuqhubela phambili kunokubonakala ngathi kukuhamba nje, kukho izizathu ezininzi zokuba engayihoyi inkazana.
Intombazana ayithandayo iyathathwa
Ukuba umfana uyayithanda intombazana, kodwa sele edibene nomnye umntu, unokukhetha ukuyeka ukusebenzisana naye. Ngelixa kunokubonakala ngathi yeyona nto intle, kukho izizathu zokuba aba bantu bangahoyi abasetyhini:
Uyazicaphukisa ngokungaziqondi iimpawu zakhe.
Uyamcaphukisa ngokunika imiqondiso exubeneyo okanye enze ngathiwayenomdla.
Kubuhlungu ukuba achithe ixesha kunye naye, esazi ukuba abanakuba nolwalamano alufunayo.
Kuyamnceda ukuba ayeke ukucinga ngaye.
Ngelixa abasetyhini becinga ukuba ubudlelwane beplato kunye namadoda bubonakala, Inzululwazi yaseMelika Iingxelo zamadoda zinexesha elinzima ngakumbi ngale meko. Xa umntu eneemvakalelo zothando kwintombazana, akanakukucima nje ezo zinto ngenxa yokuba ethathiwe. Ukuthintela kunokuba lolona khetho kuye kuphela lokugcina iimvakalelo zakhe kunye ne-ego kumonakalo ongaphezulu.
Iimvakalelo Zakhe Aziphindezelwa
Akukho nto imbi kumfana ngaphandle kokubaxelela umfazi uyamthandaxa engaziva ngendlela efanayo. Le meko inokuthi isuse i-ego yakhe kwaye imenze aphulukane nobuhlobo obuxabisekileyo kunye nolwalamano olunokubakho ngaxeshanye. Ukuthandana ubudlelwane neengcebiso kumlobi uJake, ukusuka Ubuhle Iphephancwadi, licebisa ukuba ukusuka kule meko kufuna amanyathelo aliqela, anokwahluka kancinci kuxhomekeka kumfo lowo. Inkqubo ngokubanzi yendlela abafana abajongana ngayo nokwaliwa yile:
ukuba uzothini xa umntu esifa
Ukuphazanyiswa bubomi okanye abanye abantu basetyhini
Ukumkhupha engqondweni yakhe, ngokunokwenzeka ngokunqanda
Ukuyeka ukusukela njengoko enze ukhetho lakhe
Ukuba umfana ubeka isibindi sokuxelela intombazana ukuba uyayithanda, kunokwenzeka ukuba uyabonwaiimpawu zomdlakwelakhe icala. Ngaphandle koko, unokoyika kakhulu ukuba abelane ngeemvakalelo zakhe. Abafana baya kwezi ntlobo zeencoko bekholelwa ukuba banethuba elihle kunye nalo mfazi, ke ukwaliwa kungothusa kakhulu.
Kuba amadoda kulindeleke ukuba babe ngabasunguli, kusenokubonakala ngathi banoloyiko olukhulu lokwaliwa kunabafazi. Ukujikwa phantsi ngumfazi kunokubangela ukuba indoda izive ingathandeki, ingathandeki, kwaye ngokungathi ubudoda bayo bukhona. Enye indlela yamadoda yokuphepha ukwaliwa kukuthintela nayiphi na imeko apho inokwenzeka khona.
Olu loyiko lunokubamba umntu ukuba angahlangani nomntu wasetyhini ade abone kucacile kwaye kuyabonakalaimiqondiso yokuba unomdla. Ukuphendula imiyalezo yomfazi kunye nenkqubela phambili ngamathuba okuba abone le miqondiso, kodwa unokukhathazeka nokuba ufunda kwiimvakalelo ezingekhoyo. Ukungahoyi owesifazana kuphela kwendlela yokuqinisekisa ukuba akazifundanga gwenxa iimpawu okanye alahlwe. Iprojekthi yamadoda alungileyo iphakamisa ukuba kukho izinto ezintathu ezoyikayo onke amadoda aqhutywa bubudlelwane, kwaye enye yazo loloyiko lokwaliwa.
Ubomi bakhe buxakeke kakhulu
Phakathi komsebenzi, usapho, izihlobo, izinto ezithandwayo kunye namava amavolontiya ubomi bunokuxakeka kakhulu kwabanye abantu. Ukuba indoda ayimhoyi umntu wasetyhini, inokuba kungenxa yokuba ubomi bakhe buxinene kakhulu akakwazi ukwenza ixesha lokuphendula. Udliwanondlebe kwi IAtlantic Ngo-2017 kuvavanywe ukuxakeka kwabantu baseMelika kwaye kwafunyanwa abantu namhlanje bebonakala bexakekile kunangaphambili. Zininzi izizathu zokuba ubomi bomntu buxakeke kakhulu:
Akazi ukuba athi hayi.
Unomsebenzi onzima okanye uneshishini
Uyakuthanda ukuxakeka, yinxalenye yobuntu bakhe
Ukusebenza ngakumbi kukhuthaza inqanaba lakhe ekuhlaleni njengomboneleli okanye indoda esisityebi
Ihlabathi ligcwele iintlobo ezahlukeneyo zabantu. Kukho abafana abakhulu phaya kwaye ezinye iijerks ezichanekileyo. Indoda ezithandayo engakhathaleli kwaphela iimvakalelo zowasetyhini ayizukuyihoya. Abafana abazingcayo, abazicingela bodwa nabazithembileyo bajonge ukuhlangabezana neemfuno zabo kuqala, ngaphandle kokukhathazeka ngeemvakalelo zabanye. Ngelixa umntu onje enokuthi abe yinto ejikelezileyo umntu ombi , usenokuba ubeka yena kunye neemfuno zakhe ngaphezulu kwezo zabafazi ahamba nabo. Nokuba yeyiphi na indlela, umntu ongamhloniphiyo umfazi unokungamhoyi ngenxa yokuba ezisongele kuye.
Amanye amadoda awabahoyi abafazi kuba uthando luloyikeka nje.Ukuzibophelelakunye nokuba sesichengeni ngokweemvakalelo zizinto ezisisiseko kubudlelwane obuhlala buhleli, kodwa banokoyikisa abafana kuba:
Awukhululekanga ekuvakaliseni uvakalelo
Unokukuthanda ngaphezu kokuba umthanda
Awuyi kuba nolunye ukhetho njengoko ukhokelwa ngumnqweno wokuzivelela wokwenza inzala
Uyakhunjuzwa ngamaxesha apho enzakala khona kubudlelwane obudlulileyo
Yiba nokuzithemba okuphantsi
Abantu abohlukeneyo banezizathu ezahlukeneyo zoko uloyiko lothando . Ngelixa kunokubonakala ngathi yeyona ndlela ingcono yokulwa, ukuphepha uthando kuyanceda ukuba indoda iphephe ukwenzakala. Kumadoda amaninzi, uvuyo alufanelanga ukuba buhlungu.
Unomsindo okanye Unomsindo
Ayisiwo kuphela amadoda nabafazi abacinga ngokwahlukileyo, nabo baziva ngokwahlukileyo. Ngokwesiko, amadoda afundisiwe ukucinezela kunye nokufihla iimvakalelo kwabanye nakwiziqu zabo. Le yenye isizathu Kutheni amadoda ngamanye amaxesha ebuya umva xa enomsindo okanye iimvakalelo zabo zenzakalisiwe. Umsindo yimvakalelo esekwe kwintlungu, kwaye umntu usenokungakulungeli ukubonisa le ntlungu kwabanye kuba:
Kumenza abonakale ebuthathaka
Uziva ngathi uza kuphendula ngendlela engalawulekiyo
Kumenza abe sesichengeni sokwenzakala ngakumbi
Ukuba akakuhoyi, isenokuba yindlela yakhe yokujongana nomzuzu woxinzelelo kwinto ayibona njengeyakhayo. Kwelinye icala, umfana onentsingiselo enokuthi atsho angamhoyi umfazi xa enomsindo njengendlela yokumenzakalisa umqolo.
Indoda ebambe iimfihlo inokungahoyi owasetyhini njengeendlela zokuphepha ukutyibilika ngengozi. Ukuba uyoyika ukuba uza kuzikhupha ngengozi, ukuphepha liqhinga elincedo. Unokufihla into enkulu, ngathi utshatile, okanye into encinci, ngokungathi ufumana abahlobo bakho becaphukisa. Impilo yabasetyhini Ukwabelana ngeemfihlo ezilishumi elinanye abantu bathi bayazigcina kuthando lwabo lwangoku.
Ngelixa kunokucingelwa ukuba uninzi lwabantu luneemfihlo ezithile kubahlobo abasenyongweni okanye kumalungu osapho, ayinguye wonke umntu osebenzisa ukuthintela ukugcina ezo mfihlo. Amfo oxokayookanye ukufihla into kunokungahoyi umfazi kuba imfihlo yakhe kukulawula ixesha lakhe.
Zininzi iingcebiso zokuthandana ezikhoyo kumadoda nabasetyhini abanezimvo ezahlukeneyo ngesini esahlukileyo. Ngamanye amaxesha olu lwazi luyinyani kwaye luncedo, kodwa ngamanye amaxesha luluvo nje kwaye lunokwenzakalisa. Iingcali ukuthandana websites, ezifana Umdlalo.com , cebisa ukudlala nzima ukufumana njenge okuphumelela ukuthandana qhinga ukuba amadoda nabafazi. Ingxaki, bathi, kuxa amadoda nabafazi bengavumelani malunga nokuba eli qhinga libukeka njani kanye.
Abanye abantu bakholelwa, ngokusekwe kumava nakwingcebiso yeengcali, abasetyhini banomdla ngakumbi kubudlelwane bexesha elide kunye nabafana ekungekho lula ukubabamba. Indoda inokungahoyi umfazi njengesixhobo sokufumana umdla wayo kunye nokuthakazelisa umdla wayo. Olu hlobo lomfana lubona ukuthandana njengomdlalo wekati kunye nempuku apho kufuneka ekutsalele khona, gcina ingqalelo yakho, kwaye kukumangalise ngamathuba amancinci okumbamba.
Fumana inkuthazo yakhe
Zininzi iimeko kunye neemeko ezithile apho indoda ingayikhathalelanga, iyayiphepha okanye ingayihoyi inkazana. Abafazi banokufikelela emazantsi eIinjongo zomntungokujonga ukuba kutheni beziva ngathi isenzo sakhe sibonisa ukungahoyi, kwaye yintoni enokubangela le ndlela yokuziphatha. Xa ungathandabuzeki, yiba phambili kwaye umcele nje. Kusoloko kukho ithuba lokuba umfana angahoyi ngabom lo mfazi okanye unengxaki yokujongana neemvakalelo zakhe.
Iishiti Zebhedi Imvelaphi Endlela Namatools Anti Iglasi Ne China Iindidi Zo Zokonakala Indlu Cleaning Tips
uhambisa njani amaphepha oqhawulo mtshato ukuba awukwazi ukufumana iqabane lakho
Ihlala ixesha elingakanani ikhokhovu
Iikhathalogu zasekhaya zasimahla ngeposi
umgama omde imibongo yothando ngaye entliziyweni
kutheni iikati zifihla xa zisifa
Zingakanani iihedgehogs kwi-petsmart